Home Somali News Somalia: Al-shabaab oo 30 Askari ku Dishay Weerar ay ku qaadeen saldhiga...
Ururka Al-shabaab ayaa weerar ku qaadey saldhiga ciidanka AMISOM ku leeyihiin deegaanka Leego ee gobalka Shabeellada hoose, kaasi oo la sheegayo in ay ku dileen 30 Askari.
Weerarka ayaa ku bilowday qarax weyn oo ahaa gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa oo uu wadey qof naftii hure ah, isla markaana ku qarxey meel u dhow albaabka saldhiga, waxaana xigey is-rasaaseen xoogan.
Amisom Ayaa barteeda Twiter ka ka xaqiijisay in weerar lagu soo Qaaday.
AMISOM ayaa xaqiijisay inuu jiro weerar lagu soo qaaday saldhigooda deegaanka Leego kaas oo billawday saaka la soco xog dheeraad ah #Somalia
Wararka ayaa intaa ku daraya in dagaalka uu ku faafey guud ahaan deegaanka, iyadoo Al-shabaab barahooda internetka ku soo qoray in ay la wareegeen saldhiga Leego, isla markaana dileen ciidamo farabadan.
Alshabaab ayaa sheegtay inay saldhigga qabsadeen balse Midowga Afrika ayaa sheegay in ciidamadoodu ay weli la dagaalamayaan kooxda Al-shabaab ah.
Al-shabaab ayaa weeraradooda xoojiyay ilaa bilowgii bisha Ramadan.
Somaliland: “Faafinta Diinta Islaamka Waxa Laga Helayaa Ducada Ilaahay”. Sheekh Maxamed Sh. Cumar Dirir.